Logitech dia mampiditra POP Keys, POP Mouse ary Logitech Desk Mat | avy amin'ny mac aho
Logitech dia mampiditra POP Keys, POP Mouse ary Logitech Desk Mat
Ny orinasa Logitech dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny resaka kojakoja isan-karazany, na ho an'ny vokatra Apple na ho an'ny vokatra hafa eny an-tsena. Ireo dia ny vokatra andiany vaovao Logitech Studio izay mitondra toetra, fifaliana ary toetra ho an'ny asa mahazatra.
Amin'ity indray mitoraka ity dia manodidina ny kojakoja miasa miaraka amin'ny endrika mahazatra izay manome ny mpampiasa ny endrika hita maso somary tanora sy mirindra. Izy io dia misy totozy, fitendry ary pad. Ny klavier Logitech POP Keys vaovao dia miasa amin'ny rafitra miasa rehetra, macOS, Windows, iOS, ipadOS, Chrome OS ary Android. Raha ny POP Mouse dia mifanaraka amin'ny macOS, Windows, iPadOS, Chrome OS ary Linux ihany koa.
Art O'Gnimh tenany, Filoha lefitry ny famoronana sy ny vokatra ao amin'ny Logitech naseho tamin'ny fanolorana ny vokatra vaovao ireto manaraka ireto:
Ny Logitech's Studio Series dia maneho ny maha-oririn'ny tsirairay amintsika. Miaraka amin'ny POP Keys sy POP Mouse dia namorona vokatra vaovao izahay izay mikendry ny haneho hevitra toy ny mpampiasa anay, manana toetra tsara ary tsy mampandefitra ny vokatra.
Ny POP Keys dia misy fanalahidy emoji valo azo ovaina ao anaty boaty - efatra amin'ny fitendry. Azo amboarina mora foana izy ireo amin'ny alalan'ny fisafidianana ny emoji tianao indrindra na amin'ny alàlan'ny logitech Logitech Options, azo alaina tsotra ho an'ny PC na Mac. azo amboarina mba hahatonga azy ho mahazo aina kokoa.
Ny kitendry POP Keys miendrika retro dia manome lakile mekanika mampahazo aina mampahatsiahy ny milina fanoratana sy ny endri-javatra manaraka. Ny hitsin-dàlana FN vaovao 12 dia misy fanalahidin'ny fakan-tsary, moana mikrô, ary baiko par.mba hanamora ny asa mahazatra indrindra andavan'andro. Miaraka amin'ity kitendry vaovao ity, ny traikefa amin'ny fanoratana dia saika mampiankin-doha noho ny fanalahidin'ny mekanika manome fampiononana noho ny endriny boribory.
Mahafatifaty sy mahafatifaty, ny POP Mouse dia miavaka amin'ny fahafaha-mitondra azy. Mamela anao hiasa na aiza na aiza miaraka amin'ny vokatra ambony indrindra noho ny kodiaran'ny horonana SmartWheel izay mandeha ho azy avy amin'ny maodely avo lenta mankany amin'ny horonana haingana. Ny vatany malama, natao amin'ny fampiononana ao an-tsaina, dia mifanentana tsara amin'ny felatananao mba hanampy anao hiasa tsara kokoa. Misy amin'ny loko marevaka maro mba hanazavana ny fomba fiasanao, ny POP Mouse dia manolotra endrika miloko sy falifaly izay manampy amin'ny famoronana sehatra desktop mavitrika sy manokana.
POP Keys sy POP Mouse no fanampiny farany amin'ny andiany Studio an'ny Logitech. Famoriam-bola izay ahitana ihany koa ny totozy Pebble minimalista, ny klavier K380 sy MK470, ary ny Logitech Desk Mat vaovao.
POP Keys, POP Mouse ary Logitech Desk Mat dia ho hita any Espaina amin'ny Janoary 2022 amin'ny logitech.com ary any amin'ireo mpaninjara hafa manerana izao tontolo izao. Ny vidin'ny varotra soso-kevitra dia €99,99 ho an'ny POP Keys, €39,99 ho an'ny POP Mouse ary €19,99 ho an'ny Logitech Desk Mat.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Accessories » Logitech dia mampiditra POP Keys, POP Mouse ary Logitech Desk Mat
Logitech Litra Glow vaovao, namana tonga lafatra ho an'ny mpamorona votoaty
Ny iMac Pro dia mety hampiditra processeur fahefatra M1 miaraka amin'ny CPU 12